မြ၀တီ - တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတ နိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး
Monday, 11 December 2017 22:36	font size decrease font size increase font size
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ - ၁၁
နီပေါနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari နှင့် ခတ္တမန္ဒူမြို့၊ သမ္မတရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးထွန်းနေလင်း၊ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာစစ်သံ (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး နီပေါ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတနှင့်အတူ အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် အောင်မြင် သည့် ခရီးစဉ် ဖြစ်ပါစေကြောင်း ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိမိအား လက်ခံတွေ့ဆုံသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း၊ ယခုချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်သည် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် နှစ်ရပ်ကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ရှိပြီးသား နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး ပိုမိုခိုင်မြဲစေရန်အတွက် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ နီပေါကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှုများ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ချစ်ကြည်တိုးတက်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစတင်၍ ပြည်သူမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လျှောက်လှမ်းလျက်ရှိပြီး တပ်မတော်မှ ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အတွေ့အကြုံ တစ်ရပ်အနေဖြင့် လေ့လာခွင့် ရရှိ သည့်အတွက် အကျိုးရှိပါကြောင်း၊ နီပေါနိုင်ငံ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ မျက်နှာစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ထောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနှင့် မိမိချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ် လာရောက်ချိန်တွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ခြင်း များ အတွက်လည်း အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ H.E. Mrs. Bidhya Devi Bhandari က ယခုလာ ရောက်သည့် ခရီးစဉ်သည် နှစ် ၅၀ အတွင်း မြန်မာ့တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ပထမဆုံး လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်၍ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးအတွက် အထူးအရေးပါသော ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးအတွက် အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်မှ တိုးမြှင့် ရရှိမည့် တပ်မတော်ချင်း ဆက်ဆံရေး သာမက ပြည်သူချင်း ဆက်ဆံရေးကို အခြေခံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးများ တိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ ခရီးစဉ် လာရောက်ချိန်တွင် နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန် မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား အထူးသီးသန့် အစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် အချိန်မီခန့်အပ်လွှာ လက်ခံပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတကြီး ကျန်းမာချမ်းသာ စေကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်သူများ သာယာဝပြောပါစေရန် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ယခုချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်သည် အောင်မြင်မှုရှိသော ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ တပ်မတော် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ကို ကာကွယ်ပေးရမည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် အပြည့်အ၀ အကာအကွယ်ပေးရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတ ကြီးနှင့် မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးခြင်းကိုလည်း အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က နီပေါဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတအား အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်သည်။
ထို့အတူ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကလည်း နီပေါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Sher Bahadur နှင့်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mr. Bhimsen Das Pradham နှင့်လည်းကောင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် မြန်မာ-နီပေါ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အဆင့်အလိုက် အပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေး၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အားကစားဆိုင်ရာများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည် တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် ပြည်သူမှရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်တွင် လျှောက်လှမ်းနေမှု အခြေအနေများ၊ နီပေါနိုင်ငံမှ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များတွင် တာ ၀န်ထမ်းဆောင်နေမှု အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေး တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲများ အပြီးတွင် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Read 315 times	Last modified on Monday, 11 December 2017 22:42
More in this category: « တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နီပေါနိုင်ငံရှိ ဧ၀ရက်တောင်ထိပ် အပါအ၀င် ဟိမ၀န္တာ တောင်တန်းများနှင့် Birendra Peace Operation Training Center သို့သွားရောက် လေ့လာ	လူဦးရေ များပြားလာမှုနှင့် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးလာမှုတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့များတွင် ရေလိုအပ်ချက် မြင့်မားလာခြင်းဖြစ် »